Isirinji yoxinzelelo oluphezulu, Iimveliso zoKhathalelo oluKhulu, iSirinji yesitofu sokugonya - iAnthem
I-1mL / 3mL Isirinji yokuVimba iLuer-lock
Uxinzelelo oluphezulu lwesirinji yoLungelelwaniso lweMithombo yeendaba
I-Antmed Imastar Umahluko kwi-Injector yeendaba
Utshintsho olwenziweyo loTshintshiselwano kwiiMonitha eziGulayo
Izixhobo zokuFanisa ngokuNyanga
Ukusetyenziswa kweSirinji kunye neTyhubhu
Funda nzulu >>
U-ANTMED uyinkokeli yentengiso yasekhaya kwiSirinji yoXinzelelo oluPhezulu kunye necandelo leCandelo loShicilelo loXinzelelo. Sibonelela ngesisombululo esimileyo se-CT, i-MRI kunye ne-DSA yokufaka inaliti yemithombo yeendaba, izinto ezisetyenziswayo kunye noxinzelelo lwe-IV catheters. Iimveliso zethu zithengiswa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla enje ngeMelika, iYurophu, iAsia, iOceania kunye neAfrika.
Isixhobo sezixhobo zonyango kwi-Outlook Y2021- Y2025
Icandelo lezonyango laseTshayina lihlala lilicandelo elihamba ngokukhawuleza kwaye ngoku likwindawo yesibini yentengiso enkulu yezempilo emhlabeni. Isizathu sokukhula ngokukhawuleza kukuba inkcitho eyandayo yezempilo kwisixhobo sezonyango, amayeza, isibhedlele kunye neinshurensi yokhathalelo lwempilo. Ngaphandle ...
Icandelo lezonyango laseTshayina lihlala lilicandelo elihamba ngokukhawuleza kwaye ngoku likwindawo yesibini yentengiso enkulu kwezempilo emhlabeni. Isizathu sokukhula ngokukhawuleza kukuba inkcitho eyandayo yezempilo kwisixhobo sezonyango, amayeza, isibhedlele kunye neinshurensi yokhathalelo lwempilo. Ngaphandle ...
Isirinji yesitshixo seLuer isetyenziswa kakhulu kumazwe asentshona. Kwinkoliso yamazwe asaphuhlayo, isirinji eslip esithandwa kakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi. Uyilo lwesiliphu se-luer lubonakala lulula-ungayifaka nje. Kodwa oku ayisiyonto ilula, kodwa yingxaki enkulu yeklinikhi enxulumene nokuba ...